Mawlamyine Information Technology (မော်လမြိုင် နည်းပညာ): EaseUS Data Recovery Wizard v9.5
Mawlamyine Information Technology (မော်လမြိုင် နည်းပညာ)
We are Black Hats But we promise that we respect your precious privacy. Though we are Black Hack, we don't do any destruction on your sites. We may do any penetration on every sites for improving our hacking qualities. However, we don't do any distribution, selling your data. Whatever happened, we'll do dramatically our ways...
EaseUS Data Recovery Wizard v9.5
EaseUS Data Recovery Wizard Program လေးဟာဆိုရင် Recovery လုပ်ပေးနိုင် တဲ့ Program တွေ က အထုး ကောင်းမွန် တဲ့ Program လေးပါဗျာ. ကျွန်တော် ကိုယ် တိုင် လက်တွေ့ အသုံး ပြု တဲ့ Program လေးပါ မိတ်ဆွေ တို့ Computer System မှာ မှား ပြီး Delete လုပ်မိတဲ့ ဖိုင်များ ၊ မိတ်ဆွေ တို့ USB | SD Card တွေ ကို မှား ပြီး Format ချမိလို့ အရေးကြီး တဲ့ Data တွေ ဆုံးရှံး တဲ့ အခါ မျိုး မှာ EaseUS Data Recovery Wizard Program လေးဟာ ပျောက်ဆုံး ရှံးဆုံး သွား တဲ့ Data အားလုံး ကို အချိန် အနည်းငယ် တော့ ပေး ရုံ နဲ့ 100% ပြန်လည် Recovery လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ.
Recovers deleted data, it was this formatting by simply removing the damaged hard disk partition, and so on, download EaseUS Data Recovery Wizard on direct link-fast and free you can below. The interface is simple, the other language support, works with all file systems, there are filters, easy search, can work with native, hasapreview mode.
Release name (အသစ် ထွက်ရှိတဲ့ အမည်) - EaseUS Data Recovery Wizard v9.5
Website (မှုရင်းဆိုဒ်) - Home Page
License (ခွင့်ပြုချက်) - ShareWare
Language (ဘာသာစကား) - Multi-English
Size (ဖိုင်ဆိုဒ်) - 14 MB
Os: Windows (အသုံးပြုနိုင်သည့် OS) - Windows သီးသန့်
Download (ဒီမှာဒေါင်းပါ) - EaseUS Data Recovery Wizard v9.5
How to Download Using Internet Download Manager (Internet Download Manager ဖြင့် ဘယ်လို ဒေါင်းလော့ လုပ်ရမလဲ)
View Image Here (လုပ်နည်းကိုဒီမှာကြည့်ပါ)
*Important ! You will need to install HaoZip require for extract download files on my blog. because i am using .xz format its is hightly compress then winrar.* Thank For Study my Blog.
(*အရေးကြီးလိုအပ်ပါတယ်! ကျွန်တော် Blog မှ ဒေါင်းလို့ ရတဲ့ Zip ဖိုင်များ ကို ပြန်ဖြည်နိုင် ဖို့ အတွက် မိတ်ဆွေ တို့ Computer မှာ HaoZip program အား Install လုပ်ထား ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ကျေးဇူတင်ပါသည်.)
Posted by Phyo Wathan at 8:03 PM
Labels: EaseUS Data Recovery Wizard
wqjh kuhvlm August 22, 2017 at 11:35 AM
Microsoft Security Essentials Update x86
Here Our Blog Offline Read Android Application !
Technology & Knowledge Facebook စာမျက်နှာ မှ ကိုဆန်းထွန်း ရေးသား ဖန်းတီး ထားသော ZawDecode ဟာဆိုရင် Windows , MIUI နှင့် တခြား Ando...
Command & Conquer Generals Reborn 8 (Myanmar Mode)
ကျွန်တော် ဒီ Post လေး ကို လွန်ခဲ့တဲ့ (Monday, August 4, 2014) တုန်းက ShweEainThuLay Computer & Mobile Service Center မှာ တင်ထားပေးခဲ...
Android ဖုန်း များ တွင် Virus ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက် ခံ ရ ခြင်း ပြဿနာ ဖြေရှင်း နည်း (Android phone virus0how to resolve the problem of attacks)
****************************************************** Android ဖုန်း များ တွင် Virus ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက် ခံ ရ ခြင်း ပြဿနာ ဖြေရှင်း နည်း ...
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာ လူမျိုးတွေ ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ အလွဲများ နှင့် မြန်မာ လူမျိုး အကြောင်း
ဦးလေး နှင့် တူမ / အဒေါ်နှင့် တူ / မောင်နှမ ၀မ်းကွဲများ / အဖေတူ အမေကွဲ သားသမီး များ အား လက်ထပ်ထိမ်းမြှား သည့်အခါ ခွေး အမျိုး တိရစ္ဆာန်လိုေ...
Redmi Note 4G LTE MIUI V7.5.40 Beta 5.1.2 Lollipop Space
Redmi Note 4G (HMNoteLTE) Model အားလုံး အသုံးပြု နေကြတဲ့ မိတ်ဆွေ တွေ အတွက် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ပြန် လည် Edition ပြု လုပ်ထားတဲ့ Redmi Note...
Newsoftwares မှ ထုတ်လုပ် ထား တဲ့ အသုံးဝင် တဲ့ Program လေးပါဗျာ မိတ်ဆွေ တို့ ရဲ့ Computer မှာ ရှိတဲ့ အရေးကြီး Folder တွေ ကို တခြား သူတွေ...
Redmi Note 4G LTE MIUI 7.4.26 Beta 5.0.2 Lollipop -ShweEainThuLay Edition ROM (100% Stable)
Xiaomi Redmi Note 4G (Ram2GB Single SIM) အသုံးပြု နေကြတဲ့ မိတ်ဆွေ တွေ အတွက် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ပြန် လည် Edition ပြန် လုပ်ထားတဲ့ MIUI ...
Redmi Note 4G LTE MIUI 7.1.22 Beta-ShweEainThuLay Edition ROM (99.9% Stable)
Xiaomi Redmi Note 4G (Ram2GB Single SIM) အသုံးပြု နေကြတဲ့ မိတ်ဆွေ တွေ အတွက် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ပြန် လည် Edition လုပ်ထားတဲ့ MIUI 7.1.22...
Odd RabbitaKey ROOT & Odd Rabbit Brush
ကျွန်တော် ပထမ တော့ Blog ကို November 8, 2015 ရွေးကောက်ပွဲ ပြီး မှ Post တွေ ပြန်ရေး ဖြစ်မယ် စိတ်ကူးထားတာပါ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ ကျွန်တော် Facebo...
လွမ်းမိုး - မိုးစက်တင်လေ (Mp3 Albums)
ကျွန်တော် Blog လေး ကို နေ့စဉ် လာရောက် လေ့ လာ နေကြ တဲ့အနောက် နိုင်ငံခြားသား များ နှင့် ပြည်ပ ရောက် မြန်မာ တွေ အတွက် ပြန်လည် နားစဉ် နိုင် ...
FlashFXP v5.2.0 Build 3878
Crystal Security v3.5.0.149
DVDFab Passkey v8.2.5.0
Apowersoft Streaming Video Recorder v5.0.9
Mac Bluray Player v2.16.5.2096
DigiDNA iMazing v1.3.3
Blue-Cloner Diamond v6.10 Build 721
Media Monkey Gold v4.1.9.1762 RC
Phyu Phyu Kyaw Thein - Name left
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ အကြောင်း အပြည့်အစုံ
Flash Player Pro v6.0 Update 28.09.2015
Glary Utilities Pro v5.35.0.55
HitmanPro Alert v3.1.316 Beta
Photo Instrument v7.4 Build 768
Xilisoft DVD Ripper Platinum v7.8.11 Build 2015092...
Wondershare AllMyTube v4.7.0
Wondershare Dr.Fone for Android v5.5.0
Wondershare DVD Creator v3.8.0
DVDFab Passkey v8.2.4.9
Windows 10 Toggle Tweaker V2.3
uTorrent Pro v3.4.5 build 41162 Stable
YoWindow Unlimited Edition v4 Build 52 RC
FlashFXP v5.2.0 Build 3876 Beta
BitTorrent Pro v7.9.5 build 41163 Stable
DigiDNA iMazing v1.3.2
AnyDVD HD v7.6.4.2 Beta
XMedia Recode v3.2.6.1
Windows 10 USB Installer ကို ဖန်တီးခြင်း
Marvelous Designer5Personal v2.3.48
ACDSee Ultimate v9.0 Build 565
'အရှင်နာယက'' ဆိုသေား ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ထိုလို လူမျိုးစ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် NLD အပေါ် အခြေအမြစ်မရှိဘဲ မဟုတ်မ...
သင့်ကြောင့် သမိုင်းတရားခံ မဖြစ်ပါစေ နဲ့ (Defendan...
အထူး သတိပေးချက် (၁)
Apowersoft Screen Capture Pro v1.2.1
Salfeld User Control 2015 v15.684
Salfeld Child Control 2015 v15.684
Re-Loader v1.4 RC3
php MyAdmin v4.5.0.2 Stable-All-Languages
Xilisoft Video Converter Platinum v7.8.9 Build 201...
FlashFXP v5.2.0 Build 3874
AIDA64 Extreme Edition v5.30.3561 Beta
UC Browser v5.4.5426.1034
Blender v2.76 RC 2
Nox App Player v2.5.0.0
ACE Stream v3.1
Google Chrome v45.0.2454.101 Stable
မြန်မာ့ တစ်နိုင်ငံလုံး အလိမ်ခံရတော့မှာလား ...........
* သင် ဟာ ဒါ တွေ သိပြီး ပြီ လား
WinToFlash Pro v1.3.0000
php MyAdmin v4.5 Stable-All-Languages
Hitman Pro Alert v3.1.315 Beta
Wise Program Uninstaller v1.75
Daum PotPlayer v1.6.56564 Beta
CCleaner Pro v5.10 Build 5373
EASEUS Partition Master v10.8 Technician Edition W...
Nitro PDF Pro v10.5.5.29
J River Media Center v21.0.9
Internet Download Manager v6.23 Build 22 & All Too...
US Downloader v1.3.5.9 Update 23.09.2015
Opera Developer 34.0.1996
YoWindow Unlimited Edition v4 Build 50 RC
Xilisoft DVD Ripper Ultimate v7.8.11 Build 2015092...
Re-Loader v1.4 RC1
Greasemonkey v3.5 Beta
Advanced Installer v12.4.2
ရေထဲကျလည်း ရေမဝင် ရေမမြှုပ်နိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်း Come...
တိုင်းရင်းသားတွေ လက်နက်ကိုင်ရတဲ့ အကြောင်း အစိုးရ သ...
မြန်မာကလေး ၁၀ သန်းကျော် ဆင်းရဲ မွဲတေမှု ရင်ဆိုင်နေရ...
သာပေါင်းမြို့ ဒီချုပ်ပါတီ၏ မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး ဆိုင...
ကွန်ပျုတာ, မိုဘိုင်းဖုန်း ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ များ နှင့် အသစ်သစ် သော ဆော့ဝဲ Update များ ကို အချိန် နှင့် တပြေး ညီဖတ်ရှု နိုင် ရန် Like လုပ်ထားပါ
All Windows ISO
Android Application များ
pc notepad ++
VSO ConvertX to HD
Your Multiboot USB Creator
ဂမ္ဘီရ မှော် ဝိဇ္ဇာ ဂါထာမန္တရား ဆိုင်ရာများ
မြန်မာစာတန်းထိုး ဇတ်ကား များ
Mawlamyine Information Technology